1 - 2-3- Action!
Home1 - 2-3- Action!
1 – 2-3– Action!
အလုပျလုပျတဲ့အခါ ပရိုပီသတယျဆိုတာ အရှငျးဆုံး ပွောရရငျ ယူထားတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ တနျအောငျ ထိုကျသငျ့တဲ့ လုပျအား၊ ထိုကျသငျ့တဲ့ ကြှမျးကငျြမှု ပွနျပေးတာမြိုးကို ချေါတာပါ။ ဒီအလုပျက ရတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ အသကျမှေးတယျ၊ အဲဒီအတှကျ အကောငျးဆုံးလုပျတယျ၊ ကြှမျးသထကျ ကြှမျးကငျြအောငျ ကွိုးစားတယျ။ တဈခါတဈလကြေ ကိုယျ့အသကျမှေးလောကျတဲ့အထိတော့ ဝငျငှမေရဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ပိုကျဆံတော့ ယူတယျ၊ ပရဟိတ လုပျပေးတာမြိုး မဟုတျဘူး။ အဲဒီအခါတှမှောလညျး ငါ့အသကျမှေးလောကျသညျအထိ ပိုကျဆံရတာမှ မဟုတျတာဆိုပွီး ပေါ့ပကျြပကျြ လုပျလို့မရဘူး။ ယူထားတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့တနျတဲ့ လုပျအားကို ပွနျပေးရပါတယျ။
အဲဒီလို ပရိုပီသဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါမှာ အဓိကပွဿနာပေးတာက ကြှမျးကငျြမှု မရှိတာရယျ၊ စိတျခံစားခကျြတှကေို မထိနျးခြုပျနိုငျတာရယျပါ။ စိတျခံစားခကျြကိုမှ နှဈမြိုးထပျခှဲလို့ ရတယျ။ အပွငျက ပါလာတဲ့ စိတျခံစားခကျြနဲ့ လုပျငနျးခှငျအတှငျးထဲက စိတျခံစားခကျြပါ။
အပွငျက ပါလာတဲ့ခံစားခကျြ ဆိုတာက ဥပမာ ရညျးစားနဲ့ပွတျ၊ အသညျးကှဲလာတယျ၊ အဲဒီခံစားခကျြကို လုပျငနျးခှငျဆီ သယျလာတယျ။ အိမျနဲ့အဆငျမပွဘေူး၊ မိဘနဲ့ ပွဿနာဖွဈတယျ၊ ငှရေေးကွေးရေး ခကျခဲနတေယျ စတဲ့ ပွဿနာတှေ၊ ခံစားခကျြတှကွေောငျ့ အလုပျမှာ လာထိခိုကျတာမြိုး ရှိတယျ။
ငယျငယျက ဘောလုံးပှဲတှကွေညျ့ရငျး သိပျသဘောကမြိခဲ့တာ တဈခုရှိတယျ။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ တခြို့ဘောလုံးသမားတှေ၊ နညျးပွတှဟော တကယျ့အရငျးနှီးဆုံးလို့ ပွောလို့ရတဲ့ ကိုယျ့အဖေ၊ အမေ ဆုံးပါးသှားတာတောငျမှ အသငျးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ပှဲတှဆေို ခှငျ့မယူဘဲ ဝငျကစားကွတာပဲ။ အဖေ၊ အမေ ဆုံးသှားပါတယျဆိုမှ ဝမျးမနညျးတဲ့သူတော့ ဘယျရှိမလဲ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီဝမျးနညျးတဲ့စိတျကို နောကျပို့ပွီး ကိုယျ့အလုပျကိုယျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျကွရတယျ။
ဟိုတယျတဈခုကို ဝငျသှား၊ ပွုံးရှငျစှာနဲ့ ကွိုဆိုနတေဲ့ Receptionist လေးမှာ ဘာဒုက်ခမှမရှိလို့ ပွုံးနနေိုငျတာ မဟုတျဘူး။ စငျပျေါမှာ မွူးတူးခုနျပေါကျနတေဲ့ အဆိုတျောတှေ ဘဝမှာ အစစအရာရာ ပွညျ့စုံနလေို့ ခုနျပေါကျနနေိုငျတာ မဟုတျဘူး။ အားလုံးမှာ အခကျအခဲ ကိုယျစီ၊ အဆငျမပွမှေု ကိုယျစီနဲ့ခညျြးပဲ။ ဒါကိုမှ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ ခံစားခကျြတှကေို ထိနျးခြုပျပွီး အလုပျကို အကောငျးဆုံး ဖွဈအောငျ လုပျကွရတာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈခုက လုပျငနျးခှငျထဲက ခံစားခကျြ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆကျဆံရေး အဆငျမပွတော၊ အကွောငျးတဈခုနဲ့ ပတျသကျလို့ အမွငျမတူတာကို ငွငျးကွခုနျကွရငျး ပုဂ်ဂိုလျရေးတှပေါ ပါလာတာ၊ ဒါတှကွေောငျ့လညျး အလုပျကို လာထိခိုကျတာတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဆေးရုံသှားတယျ။ အဲဒီက ဆရာဝနျ၊ ဆရာမတှေ လစာ မလုံလောကျတာတှေ၊ အိမျနဲ့ အဆငျမပွတောတှေ၊ လုပျငနျးခှငျမှာ အခကျအခဲဖွဈနတောတှေ ကြှနျတျောတို့ သိခငျြလား။ မသိခငျြပါဘူး။ သူ့ဆီကနေ အကောငျးဆုံးကုသမှုပဲ လိုခငျြပါတယျ။
ရှိုးပှဲတဈပှဲသှားတယျ။ အဆိုတျောကနေ ကြှနျတျော ကြှနျမ အသံဝငျနလေို့၊ အိပျရေးပကျြနလေို့ ပရိသတျကွီး နားလညျပေးပါ ဆိုတာမြိုး ကွားခငျြလို့လား။ မကွားခငျြပါဘူး၊ ပိုကျဆံတှေ အကုနျခံပွီး လကျမှတျဝယျထားတာ အဲဒါတှေ နားထောငျဖို့ မဟုတျဘူး။ သူ့ဆီကနေ အကောငျးဆုံး ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုကို လိုခငျြလို့ ဖွဈပါတယျ။
စားသောကျဆိုငျမှာ သှားစားတယျ။ အဲဒီက waiter လေးတှေ အလုပျလုပျရတာမှ အဆငျပွကွေရဲ့လား၊ လစာရော လောကျငှရဲ့လား၊ အဆောငျနရေတာတှရေော အဆငျပွလေား ဆိုတာ သိခငျြလား။ မသိခငျြပါဘူး။ သူတို့ဆီကနေ အကောငျးဆုံးသော ဝနျဆောငျမှုကိုပဲ လိုခငျြပါတယျ။
ဒါဆို ကြှနျတျောတို့ဆီကို ရောကျလာတဲ့သူတှကေရော ကြှနျတျောတို့ ဘာတှဖွေဈပကျြနတေယျ၊ ဘယျလိုတှေ အဆငျမပွေ၊ ဒုက်ခရောကျနတေယျ ဆိုတာကို သိခငျြပါ့မလား။ မသိခငျြပါဘူး။
ဒီတော့ ဘာကွောငျ့ အဆငျမပွဖွေဈသှားတယျ၊ ကြှနျတျော့အိမျမှာ ပွဿနာ နညျးနညျးရှိနလေို့ပါ၊ နားလညျပေးပါ စတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ (Excuse) တှေ မပေးပါနဲ့။ ဘယျသူမှ မလိုခငျြပါဘူး။ ပရိုတဈယောကျဆီကနေ လိုခငျြတာ တဈခုတညျးရှိပါတယျ။ အဲဒါ Performance စှမျးဆောငျရညျပါ။
ဆရာဝနျတဈယောကျဆီက အကောငျးဆုံးသော ကုသမှု၊ စာရေးဆရာတဈယောကျဆီက အဆငျ့အတနျးမွငျ့တဲ့ စာပဖေနျတီးမှု၊ ဟိုတယျဝနျထမျးဆီကနေ အကောငျးဆုံးဝနျဆောငျမှု၊ အဆိုတျောတဈယောကျဆီက အကောငျးဆုံးဖြျောဖွမှေု၊ ဒါတှကေိုပဲ လိုခငျြကွပါတယျ။
ဒီတော့ ကိုယျတိုငျ ပရိုပီသတဲ့သူ ဖွဈခငျြတယျဆိုရငျလညျး အဲဒီလိုအကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျ Performance ကိုသာ ပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားရပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျ့လုပျငနျးခှငျကို ရုပျရှငျရိုကျကှငျးတဈခုလို မွငျယောငျကွညျ့လိုကျပါ။ အပွငျမှာ စိတျဒုက်ခတှေ ကွုံနရေပမေဲ့ ဇာတျလမျးထဲမှာ ဟာသပုံစံသရုပျဆောငျရတာမြိုး ရှိမယျ။ သရုပျဆောငျတှေ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကွညျ့မရဘူး၊ ပွိုငျဆိုငျနကွေတယျဆိုပမေဲ့ ဇာတျလမျးထဲမှာ ညီအဈကိုအဖွဈ သရုပျဆောငျရတာမြိုးလညျး ရှိနိုငျတယျ။
ဒီအခါ ဘယျလောကျပဲ စိတျညဈနပေါစေ၊ ဒါရိုကျတာက 1 –2–3Action! ဆိုတာနဲ့ ညဈနတေဲ့စိတျတှကေို ဖယျလိုကျပွီး ဟာသဇာတျကောငျစရိုကျကို သှငျးလိုကျရတယျ။ ကွညျ့မရတဲ့စိတျကို ဖယျပွီး ညီအဈကိုဆိုတဲ့ mood ကို သှငျးလိုကျရတယျ။ Cut လို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ နဂိုစိတျအခံတှေ ပွနျဝငျလာကွတယျ။
ကြှနျတျောတို့အလုပျမှာလညျး ဒီသဘောပါပဲ။ ကနြတေဲ့စိတျဓါတျ၊ အဆငျမပွဘေူးဆိုတဲ့ စီးပှားရေး၊ ကှဲနတေဲ့ အသညျးတှကေို မနကျမိုးလငျးလို့ အလုပျထဲ ရောကျပွီဆိုတာနဲ့ မပေ့ဈပွီး ဒီက ဝနျထမျး၊ ဒီအလုပျနဲ့ အသကျမှေးတဲ့ ပရို ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျစရိုကျကို သှငျးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အကွောငျးပွခကျြတှေ အစား အကောငျးဆုံးသော စှမျးဆောငျရညျကိုသာ ပေးပါ။
Cut ဆိုတဲ့ အလုပျဆငျးခြိနျကတြော့ ပွနျညဈခငျြညဈပေါ့၊ အသညျးပွနျကှဲခငျြကှဲပေါ့။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ လူသားတှဖွေဈတာမို့ ခံစားခကျြတှေ ရှိကွတာပဲ။ ခဈြတဲ့သူနဲ့ အဆငျမပွရေငျ အသညျးကှဲမယျ။ စိတျဓါတျကစြရာရှိ စိတျဓါတျကမြယျ။ ပြျောစရာရှိ ပြျောမယျ။ အားငယျစရာရှိ အားငယျမယျ။ ဒေါသထှကျစရာရှိ ဒေါသထှကျမယျ။ ဒါတှကေ ရှောငျရှားလို့ မရပါဘူး။
ဒါကွောငျ့မို့ We cannot avoid the emotions. What we can do is to understand and manage.
စိတျခံစားခကျြတှကေို မရှိတော့အောငျ လုပျလို့မရပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ လုပျလို့ရတာက ကိုယျဘာဖွဈနတေယျဆိုတာ နားလညျအောငျလုပျပွီး အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ပါပဲ။
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပရိုပီသတယ်ဆိုတာ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်အောင် ထိုက်သင့်တဲ့ လုပ်အား၊ ထိုက်သင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ပြန်ပေးတာမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ ဒီအလုပ်က ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အသက်မွေးတယ်၊ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်၊ ကျွမ်းသထက် ကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျ ကိုယ့်အသက်မွေးလောက်တဲ့အထိတော့ ဝင်ငွေမရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ ယူတယ်၊ ပရဟိတ လုပ်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအခါတွေမှာလည်း ငါ့အသက်မွေးလောက်သည်အထိ ပိုက်ဆံရတာမှ မဟုတ်တာဆိုပြီး ပေါ့ပျက်ပျက် လုပ်လို့မရဘူး။ ယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့တန်တဲ့ လုပ်အားကို ပြန်ပေးရပါတယ်။
အဲဒီလို ပရိုပီသဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ အဓိကပြဿနာပေးတာက ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတာရယ်၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာရယ်ပါ။ စိတ်ခံစားချက်ကိုမှ နှစ်မျိုးထပ်ခွဲလို့ ရတယ်။ အပြင်က ပါလာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထဲက စိတ်ခံစားချက်ပါ။
အပြင်က ပါလာတဲ့ခံစားချက် ဆိုတာက ဥပမာ ရည်းစားနဲ့ပြတ်၊ အသည်းကွဲလာတယ်၊ အဲဒီခံစားချက်ကို လုပ်ငန်းခွင်ဆီ သယ်လာတယ်။ အိမ်နဲ့အဆင်မပြေဘူး၊ မိဘနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်၊ ငွေရေးကြေးရေး ခက်ခဲနေတယ် စတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ခံစားချက်တွေကြောင့် အလုပ်မှာ လာထိခိုက်တာမျိုး ရှိတယ်။
ငယ်ငယ်က ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ရင်း သိပ်သဘောကျမိခဲ့တာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ တချို့ဘောလုံးသမားတွေ၊ နည်းပြတွေဟာ တကယ့်အရင်းနှီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကိုယ့်အဖေ၊ အမေ ဆုံးပါးသွားတာတောင်မှ အသင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေဆို ခွင့်မယူဘဲ ဝင်ကစားကြတာပဲ။ အဖေ၊ အမေ ဆုံးသွားပါတယ်ဆိုမှ ဝမ်းမနည်းတဲ့သူတော့ ဘယ်ရှိမလဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ကို နောက်ပို့ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတယ်။
ဟိုတယ်တစ်ခုကို ဝင်သွား၊ ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ ကြိုဆိုနေတဲ့ Receptionist လေးမှာ ဘာဒုက္ခမှမရှိလို့ ပြုံးနေနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ စင်ပေါ်မှာ မြူးတူးခုန်ပေါက်နေတဲ့ အဆိုတော်တွေ ဘဝမှာ အစစအရာရာ ပြည့်စုံနေလို့ ခုန်ပေါက်နေနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးမှာ အခက်အခဲ ကိုယ်စီ၊ အဆင်မပြေမှု ကိုယ်စီနဲ့ချည်းပဲ။ ဒါကိုမှ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ခံစားချက်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတာ၊ အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်မတူတာကို ငြင်းကြခုန်ကြရင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါ ပါလာတာ၊ ဒါတွေကြောင့်လည်း အလုပ်ကို လာထိခိုက်တာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံသွားတယ်။ အဲဒီက ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေ လစာ မလုံလောက်တာတွေ၊ အိမ်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေ ကျွန်တော်တို့ သိချင်လား။ မသိချင်ပါဘူး။ သူ့ဆီကနေ အကောင်းဆုံးကုသမှုပဲ လိုချင်ပါတယ်။
ရှိုးပွဲတစ်ပွဲသွားတယ်။ အဆိုတော်ကနေ ကျွန်တော် ကျွန်မ အသံဝင်နေလို့၊ အိပ်ရေးပျက်နေလို့ ပရိသတ်ကြီး နားလည်ပေးပါ ဆိုတာမျိုး ကြားချင်လို့လား။ မကြားချင်ပါဘူး၊ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံပြီး လက်မှတ်ဝယ်ထားတာ အဲဒါတွေ နားထောင်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဆီကနေ အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကို လိုချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားစားတယ်။ အဲဒီက waiter လေးတွေ အလုပ်လုပ်ရတာမှ အဆင်ပြေကြရဲ့လား၊ လစာရော လောက်ငှရဲ့လား၊ အဆောင်နေရတာတွေရော အဆင်ပြေလား ဆိုတာ သိချင်လား။ မသိချင်ပါဘူး။ သူတို့ဆီကနေ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့သူတွေကရော ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်၊ ဘယ်လိုတွေ အဆင်မပြေ၊ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဆိုတာကို သိချင်ပါ့မလား။ မသိချင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ဘာကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်၊ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ပြဿနာ နည်းနည်းရှိနေလို့ပါ၊ နားလည်ပေးပါ စတဲ့ အကြောင်းပြချက် (Excuse) တွေ မပေးပါနဲ့။ ဘယ်သူမှ မလိုချင်ပါဘူး။ ပရိုတစ်ယောက်ဆီကနေ လိုချင်တာ တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ အဲဒါ Performance စွမ်းဆောင်ရည်ပါ။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီက အကောင်းဆုံးသော ကုသမှု၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဆီက အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ စာပေဖန်တီးမှု၊ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆီကနေ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု၊ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဆီက အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှု၊ ဒါတွေကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်တိုင် ပရိုပီသတဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုအကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် Performance ကိုသာ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုလို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အပြင်မှာ စိတ်ဒုက္ခတွေ ကြုံနေရပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဟာသပုံစံသရုပ်ဆောင်ရတာမျိုး ရှိမယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်မရဘူး၊ ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ညီအစ်ကိုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်တယ်။
ဒီအခါ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ၊ ဒါရိုက်တာက 1 –2–3Action! ဆိုတာနဲ့ ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကို ဖယ်လိုက်ပြီး ဟာသဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို သွင်းလိုက်ရတယ်။ ကြည့်မရတဲ့စိတ်ကို ဖယ်ပြီး ညီအစ်ကိုဆိုတဲ့ mood ကို သွင်းလိုက်ရတယ်။ Cut လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ နဂိုစိတ်အခံတွေ ပြန်ဝင်လာကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ကျနေတဲ့စိတ်ဓါတ်၊ အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ စီးပွားရေး၊ ကွဲနေတဲ့ အသည်းတွေကို မနက်မိုးလင်းလို့ အလုပ်ထဲ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မေ့ပစ်ပြီး ဒီက ဝန်ထမ်း၊ ဒီအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့ ပရို ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို သွင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အကြောင်းပြချက်တွေ အစား အကောင်းဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ ပေးပါ။
Cut ဆိုတဲ့ အလုပ်ဆင်းချိန်ကျတော့ ပြန်ညစ်ချင်ညစ်ပေါ့၊ အသည်းပြန်ကွဲချင်ကွဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ လူသားတွေဖြစ်တာမို့ ခံစားချက်တွေ ရှိကြတာပဲ။ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အဆင်မပြေရင် အသည်းကွဲမယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျစရာရှိ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ ပျော်စရာရှိ ပျော်မယ်။ အားငယ်စရာရှိ အားငယ်မယ်။ ဒေါသထွက်စရာရှိ ဒေါသထွက်မယ်။ ဒါတွေက ရှောင်ရှားလို့ မရပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ We cannot avoid the emotions. What we can do is to understand and manage.
စိတ်ခံစားချက်တွေကို မရှိတော့အောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်လို့ရတာက ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ နားလည်အောင်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 3:11 AM
Zin Mar Htwe December 18, 2021 at 5:39 AM
KhantGyi December 18, 2021 at 8:03 AM
Mon mon December 19, 2021 at 1:31 AM
Aye Thandar Soe December 19, 2021 at 5:50 AM
Aye Zaw Thu December 19, 2021 at 10:50 PM
Mon mon December 20, 2021 at 1:35 AM
ခြိုသာတဲ့ ညိုပွာ December 28, 2021 at 4:18 AM
Sammi January 3, 2022 at 7:01 AM
We cannot avoid the emotions. What we can do is to understand and manage.